TEDxInyaLake ၏ ပွဲဦးထွက် Myanmar Connects အစီအစဉ်တွင် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဦးဆောင်သူများက ပါဝင်ဟောပြောဆွေးနွေးသွားမည် - Sci-Tech4MM Magazine
Sci-Tech4MM Magazine
Science And Technology For Myanmar Magazine
MrPeace 6:34 AM No comments:
( လက်မှတ်များကို မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်တွင် ရောင်းချသွားမည်)
TEDxInyaLake အနေနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသောအခွင့်အရေးများကို အသုံးချပြီး မြန်မာကို ကမ္ဘာနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုမြန်ဆန်ကောင်းမွန်လာသော အင်တာနက်နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲမှုတို့မှတဆင့် အင်တာနက်ပေါ်မှ အခမဲ့ရရှိနိုင်သော အတွေးအခေါ်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ သိရှိရယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာက ယေဘုကျအားဖြင့် ယှဉ်တွဲသိမြင်ခဲ့သော ပုံရိပ်များဖြစ်သည့် အာဏာရှင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ ဂိုဏ်းဂဏ အဓိကရုဏ်းများ၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုများနှင့် သဘာဝကပ်ဘေးကျရောက်မှု များသာ ဖြစ်ပေါ်သောနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေမှန်ကို ကမ္ဘာကသိရှိနိုင်စေရန် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
TEDxInyaLake ဖြစ်မြောက်အောင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကဏ္ဍနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဦးဆောင်သူများနှင့် စုစည်းဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးပမ်းနေသော ဥပဒေပြုပုဂ္ဂိုလ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေသူများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းသူများ၊ မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် စွမ်းဆောင်နေသည့် စွန့်ဦးတီထွင်သူများအပြင် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ လူမှုရေးပညာရှင်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို နည်းပညာ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လူငယ်ရေးရာ၊ သမိုင်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စသည့်ခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
“ကျွန်မတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကောင်းမွန်ပေမယ့် ဖော်ထုတ်ခွင့်မရသေးတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် မတူညီသော အယူအဆ၊ အသက်အရွယ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတို့မှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်” ဟု ပွဲစီစဉ်သူ မသီရိသန့်မွန် မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပါဝင်ဟောပြောမည့်သူ အယောက် ၅၀ ခန့်ကို စိစစ်လေ့လာခဲ့ပြီး တစ်ဒါဇင်ကျော်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်သည် TED အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်များကို အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် မတ်လ ၁၃ ရက် နေ့လယ်ခင်း ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်မှတ်စောင်ရေ ၁၀၀ သာ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်စောင်ကို တစ်သိန်းကျပ်နှုန်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ထို့အပြင် လက်မှတ်အစောင်ရေ ၅၀ ကို ကျောင်းသားနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခမဲ့သီးသန့်စီစဉ်ထားပါသဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်လိုသည့် အသင်းအဖွဲ့များမှ မတ်လ (၁) နှင့် (၇) ရက် အတွင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://goo.gl/forms/on6YbPiZB7 မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်အကြောင်းပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်ဟောပြောဆွေးနွေးမည့်သူ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁။ ယဉ်မျိုးစု (စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ Inthar Heritage House and Inle Heritage Foundation)
၂။ Debbie အောင်ဒင် (လူမှုရေး စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ Proximity Designs)
၃။ အောင်စိုးမင်း (ပန်းချီပြခန်းပိုင်ရှင်၊ ပန်းဆိုးတန်းပြခန်း)
၄။ အောင်နိုင်ဦး (ရင်းနှီုးမြှုပ်နှံရေး မြှင့်တင်သူ၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန)
၅။ ချယ်ရီဇာဟောင် (လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ)
၆။ Helen Waller (ပညာရေး ပညာရှင်၊ Pre-Collegiate Program)
၇။ လင်းဆန်းဦး (မှတ်တမ်းရုပ်ရင်ရိုက်ကူးသူ၊ Tagu Films)
၈။ မေသွေးကို (ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းသူ၊ Yangon Heritage Trust)
၉။ နေအုပ် (ပညာရေး ပညာရှင်၊ Institute of English)
၁၀။ Pascal ခူးသွယ် (စာရေးဆရာ၊ From the Land of Green Ghosts)
၁၁။ Steven ဆွီးအုပ်ထန်း (လူမှုရေး ပညာရှင်၊ ချင်းလူမှုရေးပညာ တက္ကသိုလ် - ဖလန်းမြို့)
၁၂။ သူရကိုကို (Private Equity ပညာရှင်၊ YGA Capital Ltd.)
၁၃။ တင်မောင်မောင်အေး (ရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း တည်ထောင်သူ)
၁၄။ ရန်နောင်အုပ် (နည်းပညာ ပညာရှင်၊ ဖန်တီးရာ)
ကမ္ဘာအနှံ့မှ ကောင်းမွန်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသူများ စုစည်းတွေ့ဆုံနိုင်စေပြီး မိမိတို့ဒေသအလိုက် TED ကဲ့သို့ ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် TED အဖွဲ့မှ TEDx အမည်ဖြင့် ထူထောင်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မည့် TEDx ဟောပြောပွဲကို TEDxInyaLake ဟု အမည်ပေးထားပြီး x က တော့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာ ပြုလုပ်တဲ့ပွဲလို့ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါသည်။ ယခု TEDxInyaLake အစီအစဉ်က အခြားနိုင်ငံများမှ TED ဟောပြောပွဲ ဗွီဒီယိုများနှင့် TEDxInyaLake တွင် ပါဝင်သူများ၏ ဟောပြောမှုများကြောင့် လေးနက်သော ဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပေါ်အခြေတည်ရန်နှင့် စိတ်သဘောထား တိုက်ဆိုင်သူများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မိစေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ ပင်မ TED အဖွဲ့အစည်းမှ ညွှန်ကြားအကြံပေးချက်များကို ရယူခဲ့သော်လည်း TEDx နှင့် TEDxInyaLake ဟောပြောပွဲများသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်စွာစုစည်း တင်ဆက်သော ဟောပြောပွဲများ ဖြစ်ပါသည်။
TED သည် ကောင်းမွန်သော အတွေးအခေါ်အယူအဆများ ပျံ့နှံ့စေရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်မယူပဲ တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နယ်ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးမှ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့် ဦးစီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှ အနှစ်သာရပြည့်ဝသည့် ဟောပြောမှုများမှတဆင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတို့ကို ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်း ဟောပြောမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၈ မိနစ်ထက်ပိုလေ့မရှိပဲ တိုတိုတုတ်တုတ် စုစည်းတင်ပြလေ့ရှိသည်။ ထိုဟောပြောပွဲအများစုကို ကနေဒါနိုင်ငံ ဗင်ကူးဗားမြို့၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပသော TED ဟောပြောပွဲများတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ TED တွင် ဟောပြောခဲ့သူများအနက် Bill Gates၊ Jane Goodall၊ Elizabeth Gilbert၊ Sir Richard Branson၊ Nandan Nilekani၊ Philippe Starck၊ Ngozi Okojo-Iweala၊ Sal Khan နှင့် Danial Kahneman တို့ ပါဝင်သည်။
TED နှင့်ပတ်သက်၍ အခမဲ့ လွတ်လပ်စွာပါဝင်နိုင်သော အစီအစဉ် အများအပြားရှိသည်။ TED.com တွင် TED ဟောပြောပွဲ ဗွီဒီယိုအသစ်များကို နေ့စဉ်တင်ဆက်လျက်ရှိပြီး Open Translation Project တွင် ကမ္ဘာအနှံ့မှ ပါဝင်လုပ်အားပေးသူများက TED ဗွီဒီယိုများအတွက် ဘာသာပြန်စာတန်းထိုးခြင်း၊ ဟောပြောပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းများကို မှတ်စုအနေနဲ့ ပြန်လည်ရေးသားခြင်းများပြုလုပ်ကာ ပါဝင်ကူညီကြသည်။ ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောအစီအစဉ်များကို TED-Ed အနေနဲ့ သီးခြားတင်ပြပြီး သူမတူအောင် ထူးခြားပြောင်မြောက်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အတွေးအခေါ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် TED Prize က ဒေါ်လာတစ်သန်း ဆုချီးမြှင့်လေ့ရှိသည်။ TEDx အစီအစဉ်ကတော့ TED ၏ တရားဝင်လိုင်စင်ရယူပြီး မိမိတို့ဒေသတွင် TED ကဲ့သို့ ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ကြသည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ထူးချွန်သော တီထွင်ကြံဆသူများကို TED Fellow အစီအစဉ်က ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့၏တီထွင်မှုများကို အများအကျိုးအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။
TED ကို Twitter တွင် http://twitter.com/TEDTalks ဟု လည်းကောင်း၊ Facebook တွင် http://facebook.com/TED ဟု လည်းကောင်း၊ Instagram တွင် http://instagram.com/ted ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
About MrPeace -
VMware Workspace ONE သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ...
Xamarin ကြောင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က မိုဘိုင်းနယ်ပယ်မှာဦးဆောင်လာနိုင်မလား
ယနေ့ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊တက်ဘလက်၊ဂိမ်းစက် စသဖြင့် devices ပေါင်းစုံလှသလို OS တွေကလည်း မိုဘိုင်းအတွက်ရော ပီစီအတွက်ပါ platf...
မီဒီယာဖိုင်များကို ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်မယ့် Plex Media Server
ယနေ့အခါမှာ လူသုံးကုန်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ၊ အိုင်တီပစ္စည်းတွေများစွာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးထားကြပါတယ်။ စမ...
( လက်မှတ်များကို မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်တွင် ရောင်းချသွားမည်) လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ...
တကယ့်အရာဝတ္ထုများကို 3D ပုံရိပ်များအဖြစ်ဖမ်းယူကာ 3D ပရင်တာဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် Sprout Pro ကွန်ပျူတာအား HP မှထုတ်လုပ်ဖန်တီး
လွန်ခဲ့သည့် ၇လခန့်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော Sprout ကွန်ပျူတာ၏ ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Sprout Pro အား HP မှထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည...
သင့်ရဲ့ Devices များကို တာရှည်သုံးစွဲနိုင်စေမည့်နည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့ နည်းပညာအဟောင်းတွေကို အသစ်သဖွယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သင့်ရဲ့ပီစီ၊ ပရင်တာ၊ တက်ဘလက်...
ကောင်းကင်ပေါ်က နိုင်ငံများရဲ့စုစည်းမှု (သို့မဟုတ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်း
တစ်စက္ကန့်လျှင် ၄.၇ မိုင်နှုန်းဖြင့်လှည့်ပတ်နေသော သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းဟာ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာရဲ့ အင်ဂျင်နီယာ စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်က...
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းလုံခြုံရေးအတွက် နည်းလမ်းများ
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ စမတ်ဖုန်းများနဲ့အတူ ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ ဈေးဝယ်ဖို့၊ လူမှုကွန်ရက်တွေသုံးစွဲဖို့ ၊ Brows...
ပိုမိုထူးခြားဆန်းပြားသော စမတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အသင့်အနေအထားရှိနေပြီဖြစ်သော Intel Curie
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော CES လူသုံးကုန်အီလက်ထရွန်းနစ်ပြပွဲတွင် ဆန်းသစ်သော နည်းပညာအသစ်များထက် မကြာသေးမီနှ...
(အရည်အသွေးမြင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများအတွက် ကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်ပြီဖြစ်) (ရန်ကုန်၊ ...
Email: scitech4mm@gmail.com Twitter: @sci_mm Facebook: fb.com/scitech4mm YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCN9xYdr0Y9qklfr3VpdksjA
© Copyright 2015 Sci-Tech4MM Magazine. Designed by Bloggertheme9 | Distributed By Gooyaabi Templates. Powered by Blogger.